देशैभरका धेरैजसो सडकमा खाल्डाखुल्डी, मर्मतका लागि छुट्टाइएको बजेट किन खर्च हुन सकेन ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more देशैभरका धेरैजसो सडकमा खाल्डाखुल्डी, मर्मतका लागि छुट्टाइएको बजेट किन खर्च हुन सकेन ?
देशैभरका धेरैजसो सडकमा खाल्डाखुल्डी, मर्मतका लागि छुट्टाइएको बजेट किन खर्च हुन सकेन ?
अशोज ३० गते, २०७७ - १७:२२
काठमाडौं । देशभरका राष्ट्रिय राजमार्गसहित शहरी सडक र ग्रामीण सडकमा मर्मतको अभावमा अवस्था झन खराब भइरहँदा सडक मर्मतका लागि छुट्टाइएको बजेट भने खर्च हुन सकेको छैन ।
नियमित सडक मर्मतसम्भारका लागि सुन्तला रङ्गका लुगा लगाएका व्यक्ति नियमित रुपमा सडकमा खटिनुपर्ने प्राविधिक निर्देशक ज्ञवलीले बताए । “नाला सफा गर्ने र सडकलाई दुरुस्त बनाउने जिम्मेवारी भए पनि राजमार्गमा उनीहरुलाई कम देख्ने गरिएको छ”, उनले भने, “यसको मतलब कार्यान्वयन कम भएको हो ।” बोर्डले नियमित, पटके, आवधिक, विशेष, आकस्मिक गरी सडकको अवस्था र आवश्यकताअनुसार मर्मतका लागि बजेट छुट्ट्याउँदै आएको छ । निर्देशक ज्ञवलीका अनुसार खाल्डा पुर्ने कामका लागि माग भएअनुसार नै पैसा दिए पनि खाल्डा टालिएको छैन । आवधिक मर्मत मागानुसार पैसा दिन नसकिएको तर छुट्ट्याइएको रकम समेत खर्च हुन नसकेको उनले बताए। उनले भने, “पाँच सय किमी माग हुँदा तीन सय किमीमा पनि काम भएको छैन् ।”
बोर्डले विनियोजन गरेको बजेट अनुसारको रकम खर्च नहुनुमा अर्को महत्वपूर्ण कारण कम रकममा ठेक्का कबुल हुनु पनि रहेको उहाँको भनाइ छ । काम गर्ने निकाय मात्रै होइन, निर्माण कम्पनीले पनि नयाँ निर्माणभन्दा सडक मर्मतमा कम चासो दिने गरेको पाइन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “निर्माणमा थोरै क्षेत्रफलमा काम गर्दा धेरै रकमको काम हुन्छ तर मर्मतमा थोरै रकममा धेरै क्षेत्रफलमा काम हुने भएकाले पनि यसमा सबैको ध्यान कम गएको हो ।”
लक्ष्यानुसार मर्मत हुन नसक्नुका कारण आवश्यक जनशक्तिको कमी भएको सडक विभागले बताउँदै आएको छ । बोर्डको ऐनले स्थानीय सडकको मर्मत नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिमार्फत गर्ने उल्लेख छ । सङ्घीय सडकका लागि ७० प्रतिशत र स्थानीय सडकलाई ३० प्रतिशत रकम छुट्ट्याइने गरिएको हो । अहिले पनि नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकालाई पहिलेदेखि दिइँदै आइएको रकम दिएको छ । पहिले जिविसले निर्माण र मर्मत गर्ने ग्रामीण सडकको जिम्मेवारी अहिले गाउँपालिकामा आएकाले त्यो रकम गाउँपालिकालाई दिने गरिएको छ । देश सङ्घीयतामा गएपछि विभिन्न सडक प्रदेशमा हस्तान्तरण भएको छ । बोर्डले भने अहिलेसम्म प्रदेशमा सडक मर्मतका लागि रकम नछुट्ट्याइएको उनले बताए । उनले भने “यो वर्ष छुट्ट्याइने कि भनेर छलफल भइरहेको छ ।”
बोर्डले सडक उपभोग दस्तुर, पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले लिने लेबी, सवारीसाधन दर्ता शुल्कलगायतबाट सडक मर्मतका लागि बजेट प्राप्त गर्दछ । सडक उपभोग दस्तुर सिधैँ बोर्डको खातामा आउने भए पनि अरु रकम सरकारले लिएर छुट्टाएर दिने गरेको छ । उपभोग दस्तुरमध्ये दुई तिहाई रकम त्यही सडकमा खर्च गर्नुपर्छ । बुटवाल–नारायणगढ सडकमा अहिले एशियाली विकास बैँक ९एडिबी० ले विस्तार गरिरहेको छ तर सो सडकमा उठाइएको दस्तुर ऐनअनुसार अन्यत्र लैजान पाइँदैन भनेर रोकिएको बोर्डले जनाएको छ ।
अशोज ३० गते, २०७७ - १७:२२ मा प्रकाशित